Ny akoho kely fohy Anglisy: ny fanoritsoritana ny zozoro sy ny toetrany, ny toetran'ny fitazonana sy ny fitomboany, ny sary - Poultry farming - 2019
Ny jiolahim-boto tena izy dia miady ho amin'ny farany - Ireo akoho kely amin'ny ady anglisy
Fantatry ny olona ny momba ny karazana ady. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny fikambanana sy ny fitondran-tena toy izany - tsy mahazatra.
Fa mavesatra ny lanjan'ny hena, mikodiadia avy any an-tongotra ka hatrany an-tongotra, afa-tsy ny mpanohitra am-pitiavana ao amin'ny taolan-tehezana ary miverina any an-trano. Tsy misy endrika, tsy misy, tsy misy herisetra.
Fa ireo akoho ady amin'ny Anglisy kosa dia hiady toy ny jiolahimboto - mandra-pahatongan'ny ra, mandra-piverin'ny fahavalo amin'ny tongony.
Sambany vao nisy zana-pokonolona sambon-taolana anglisy nentina tany Angletera tamin'ny alikadia anglisy nifandimby ary ny solontenan'ny Malay avy amin'ny heniheny.
Tamin'ny andro fahiny, niady manokana ny fiompiana zana-ketsa ho an'ny fandaminana ny fisamborana, izay tian'ny olona ambony, ny mpiady ary ny olon-tsotra dia tia mijery.
Ny tanora tao anatin'ny ady ara-tafika dia nitarika ny paikadin'ny fitondrana dihy avy amin'ireo namana volom-borona, ary tena nanampy azy ireo handresy ny ady tsy mitovy. Ary ny vahoaka fahiny avy amin'ny Gauls dia nirehareha tokoa tamin'ny anarany. Raha ny marina, ny dikanteny amin'ny teny latinina "gall" dia midika hoe "rooster".
Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy mahazatra loatra ny fifandonana. Tantsaha miady ho an'ny biby miteraka vorona manokana ho an'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana. Amin'ny ankapobeny dia ny anarany dia misy ny anaran'izy ireo ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Votoatiny sy fambolena
Aiza no hividianana any Rosia?
Famaritana momba ny fizarana ankapobeny
Ny akohokely kely bitika Anglisy amin'ny volo lehibe, ny vatana mankany amin'ny rambony dia mifangaro amin'ny endriky ny kofehy.
Ny lava dia lava sy malefaka, vetivety, ny felatanana eo amin'ny tendany dia fohy ary mifanentana amin'ny vatana. Nitsangatsangana tamim-boninahitra ny tratra, nanitsy. Ny tsipika horita eny ambadiky ny lamandy dia midina mankany amin'ny seza taila. Ny elatra dia avo lenta, mihodina, mifatotra amin'ny vatany. Ny rambo dia fohy sy matevina.
Ny loha dia tsara tarehy sady tsara tarehy, mendrika ny handriny. Beak somary mavo, maso - mena. Ny fehiloha amin'ny endrika ivelany dia samy hafa amin'ny karazam-borona hafa. Efa lava izy ireo, miaraka amina teti-piovana midadasika, mivantana eo amin'ny lohalika, eo amin'ny tongony - gripa maranitra.
Misy karazany ny akoho amin'ny ady anglisy: misy volon'ondry volom-bolafotsy, misy volon'ondry volom-bolafotsy sy menamena amin'ny lamosina, miaraka amina trondro misy menaka. Misy olona manga miaraka amin'ny menaka manitra eo amin'ny tratra.
Ireo havokavoka ireo dia mendrika ny anarany noho ny tsy fisian'izy ireo sy ny fifehezany, ny faniriana "hanazava ny fifandraisana" amin'ny mpifaninana. Noho ny tratra mahery eo amin'ny tratra, tongotra lava, mafy be amin'ny fisaritahana tsy misy mitovy aminy.
Ny fomba fihetsika sy ny fiatrehana ireo mpifaninana amin'ny akoho anglisy ady dia samy hafa:
Ny mpandroba dia mamindra tsikelikely, ary lozabe matanjaka eo amin'ny tratrany sy ny lohany.
Rooster dia mihodinkodina mpanohitra irayary raha vao very ny fahamendrehany, dia mamely azy mafy. Ny taktika amin'ny ady dia tsara satria ny fahavalo amin'ny faran'ny ady dia tototra tanteraka ary tsy mitsahatra manohitra ny mpiady.
Ilay mpibaiko dia misafidy fomba tsy dia tsara loatra amin'ny ady, mitsambikina avy eo ary mitokona eo an-doha.
Ny akoho dia miezaka mampiasa taktika amin'ny ady: esperanto, fa amin'ny fotoana mahamety azy, dia manapoaka baomba tsara, toy ny bokotra iray eo amin'ny peratra.
Na dia eo aza ny fitiavam-bolo amin'ny teny Anglisy dia ambany noho ny hena sy ny atody maro amin'ny lafiny maro, dia tena sarobidy izy ireo ary afaka mividy karazana tahirin-tsolika toy izany, fa ho an'ny vola mendrika, mahatratra dolara an-jato.
Mitombo tsikelikely ny akoho miady amin'ny akohoNoho izany, ilaina ny manomboka ny fiofanana tsy aloha, 8 volana taorian'ny nahaterahany.
Ny olon-dehibe dia mahatratra 2 taona monja. Saingy mba hahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana dia mila ampianarina tsy tapaka izy ireo. Tsy izy io no matanjaka, fa iza no manana fahaiza-manao. Ary azo jerena izany rehefa miditra ny ady ny mpiady volo.
Ny akoho toy izany dia mitaky ny sakafo ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny mba hahafahan'ny mozika matanjaka hijanona ho tsara. Fa vitaminina amin'ny mineraly koa dia tena zava-dehibe ho azy ireo, noho izany dia tsara ny mandeha tsy tapaka ny akoho ady amin'ny Anglisy amin'ny zana-tany maitso.
Satria ny tompon-dakan'ny Anglisy dia mpihinam-panoherana mahatsiravina, tsy hamela mpifanandrina na olon-tsy fantatra any amin'ny faritaniny izy ireo. Raha mitranga izany, dia tsy ho azo atao ny ady ho an'ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fandresena dia azo antoka fa ny mpilalao dia hahazo fandresena, ary ny vahiny tia fihavanana dia hijaly be.
Amin'ny maha-loharanom-bozaka vita amin'ny lobaka tsara dia tsy voatery hisara-panambadiana ity zana-bary ity, satria tsy ampy ny lanjan'ny fifandonana Anglisy amin'ny dingan'ny fitomboana.
Ny lahy lehibe dia manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 kilao, ary ny akoho sy ny kely - ka hatramin'ny 1.5 ka hatramin'ny 2.5 kilao.
Ny lanjan-tsakafo dia eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 60 grama.Manana kiraro mavo na fotsy izy io. Ny atody dia mahatratra atody 100. Amin'ny ankapobeny, ny akoho mifandona amin'ny teny Anglisy dia ampiasaina amin'ny fambolena biby fiompy mba hiampitana karazam-borona hafa - mba hamoronana zary vaovao sy hena izay handova fananganana matanjaka sy tondro ara-batana tsara amin'ny ady.
Ny fepetra takiana amin'ny fitazonana ity zary ity dia akanjo kofehy mafana, satria tsy akaro ireo akoho ireo, toy ny zana-trondro hafa, avy amin'ny volom-borona tsara. Rehefa mangatsiaka ny akoho mpiady dia mahatsapa ho ratsy, tsy mavitrika izy ireo ary mora marary. Amin'ny toe-javatra mampiadana, manomboka manomboka atody ny zezika.
Anisan'izany ny Yamato, Touzo ary Ko-Shamo. Manana fihenam-bolo koa izy ireo, rakotry ny felam-boninkazo matevina sy fohy, manana vatana ary tongotra.
Ny akoho Chabot dia tsy mitovy amin'ireo amboadia amin'ny tantsaha anglisy izay eritreretintsika.
Azonao atao ny mividy akohon-jazakely amin'ny fifandonana Anglisy any Rosia:
Fitaterana any Taganrog. +7 (951) 539-88-71, E-mail: [email protected]
"Minifarm amin'ny an-tokontany", Yaroslavl, Pereslavl-Zalessky Tel .: + 7 (929) 996-91-08, +7 (916) 776-19-95, Irina, Alexander.
Raha te haka trano ianao, dia mila manapa-kevitra ny amin'izay hitrangan'ny vorona. Ireo akoho ady amin'ny English dia tsy hanome ny tompon-tsakafo betsaka amin'ny henan'akoho ary tsy ho faly amin'ny isan'ny atody napetraka.
Fa afaka mahita foana ianao hoe ahoana no ifandraisan'ireo mpitarika mpiara-miasa amin'ny mpanafika azy. Zavamaniry tsara tarehy sy tsara tarehy ity, ny tanjon'izany dia ny hampifaly ny mpanatrika amin'ny fanehoany ny fahaiza-manaony.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny jiolahim-boto tena izy dia miady ho amin'ny farany - Ireo akoho kely amin'ny ady anglisy